Impahla yaseTshayina eQotywayo yokuSonga iRakhi kunye neFactory |Yongrun
IiRakhi eziQoqayo Iimpahla zokuSonga ilaphu ezijingayo
Izinto:pp iplastiki + isitshizi sombhobho wentsimbi
Umbala:Grey / Blue
Iinkcukacha:Umbhobho ubukhulu 22/19/13cm
Ubungakanani boPhuhliso lweMveliso:(75-126) * 64 * 170mm
Ubungakanani obuvaliweyo:73 * 48 * 170cm
1.Indawo enkulu yokomisa: kunye nobukhulu obungatyhilwanga ngokupheleleyo (75-126) * 170 * 64mm (W x H x D), Kule rack yokumisa iimpahla zinendawo yokomisa ubude be-16m, kwaye imithwalo emininzi yokuhlamba ingaba yomiswe kwangoko.
I-2.Umthamo wokuthwala kakuhle: Umthamo womthwalo we-rack yempahla yi-35 kg, Ulwakhiwo lwale rakhi yokomisa lomelele, ke akufuneki ube nexhala malunga nokungcangcazela okanye ukuwa ukuba iimpahla zinzima kakhulu okanye zinzima kakhulu.Iyakwazi ukumelana nempahla yentsapho.
3.Multifunctional: Ungayila kwaye udibanise i-rack ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zokomisa.Ungaphinda uyisonge okanye uyivule ukuze usebenze kwiindawo ezahlukeneyo.Umphezulu othe tyaba unokomisa ngokukodwa iimpahla ezinokubekwa mcaba kuphela ukuze zome.
4. Izinto ezisemgangathweni ophezulu: Izinto eziphathekayo: yi-PA66 + PP + insimbi yomgubo, Ukusetyenziswa kwezinto zentsimbi kwenza i-hanger izinze ngakumbi, akulula ukuyishukumisa okanye ukuwa, kwaye akukho lula ukubethwa ngumoya.ilungele ukusetyenziswa ngaphandle nangaphakathi;iikepusi ezongezelelweyo zeplastiki ezinyaweni nazo zithembisa ukuzinza okulungileyo.
5. Uyilo lokuma lwasimahla: Kulula ukuyisebenzisa, akukho ndibano ifunekayo, Le rack yokumisa inokuma ngokukhululekileyo kwibalcony, egadini, kwigumbi lokuhlala okanye kwigumbi lokuhlamba impahla.Kwaye imilenze eneenyawo ezingapheliyo, ngoko i-rack drying inokuma ngokuzinzileyo kwaye ayiyi kuhamba ngokungaqhelekanga.
Uyilo lwe-Screw olunamandla. uyilo lwe-screw ye-Analog, ukuqhawula lula, ityhubhu ayinciphisi.
Ukunciphisa ibhaktheriya, ukusombulula iimpahla, izicathulo, iitawuli, i-diapers kunye nezinye iingxaki zokumisa.
I-360 degree swayipha, kulula ukuyihambisa.
Ngaphambili: Iimpahla ezisongayo Zokomisa iRakhi
Okulandelayo: Udonga olunyuswe ngokusonga iRakhi yokumisa
I-Multilayer Ukusongwa kweMpahla yesinyithi eshukumayo iDryin...